Banki Moon oo warqadaha Aqoonsiga ka gudoomay Danjiraha Somalia ee QM
Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay, Ban Ki-moon ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha Somalia ee Qaramada Midoobay Yuusuf Garaad Cumar ,kaasi oo gaaray magaalada Newyork.
Kulan gaaban oo labada mas’uul dhex-maray ayaaa looga hadlay xaalad-da guud ee Somaliya ,waxaana safiirka uu Qaramada Midoobay uga mahad-celiyay sida ay Somalia u soo garab- taagnayd tan iyo markii uu bur-burku dhacay.
“Waxaan uga mahad-celiyay sida ay Qarammada Midoobay u garab taagan tahay Soomaaliya, laga soo billaabo maamulkii Qarammada Midoobay ee Soomaaliya gaarsiiyay xorriyadda. Waxaan uga mahadceliyay sida inta uu xilka hayay uu Soomaaliya isugu howlay in uu gargaaro xag aadminnimo, xag amni iyo xag siyaasadeedba “ ayuu safiirku ku soo daabacay blog-ga uu ku leeyahay Internet-ka.
“Waxaan xusay in Soomaaliya ay ka soo baxday ku meel gaarka, in ay sameyneyso horumar, ayna u baahan tahay in la joogteeyo lana xoojiyo kaalmada maaddaama ay hey’adaha dalka iyo weliba horumarkeedu ay weli curdan yihiin “ ayaa kamid ah qoraalka uu soo qoray safiirka.
Yuusuf Garaad ayaa sheegay in xoghayaha guud ee QM oo dhawaan shaqada ka fariisanaya uu ka dalbaday madaxda dowladda Somaliya in ay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga dhalan lahayd xasilooni buuxda iyo dowlad-nimo dhamaystiran.
Ugu danbayn , safiirka Somalia ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in dhawaan la dhamaystiri doono hanaanka doorashooyinka dalka ,iyadoo marka la gaaro sanadka 2020-ka la filayo in ay dhacdo doorasho ay shacabku codkooda dhiibtaan, taasi oo lagu waday in sanadkan ay dhacdo.
Xasan Sheekh, ayaa bayaan uu soo saary ku xusay in dadka soomaaliyeed ee Qurbaha ku nool ay is-barbar taagaan shacabka dhibaataysan ee aanan haysan cunnada iyo biyaha, ayna saameeyeen abaaraha waddanka ka jira.
Sidoo kale, Madaxweyne Xasan ayaa u jeediyay Hay’adaha gagaarka dunida inay gacan ka geystaan sidii loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu ku habsadeen, kuwaas oo xaaladahooda nololeed laga darinayo.
Deegaanno badan oo ku yaalla, Bartamaha iyo Waqooyiga - Soomaaliya ayay ku dhufteen abaaraha ugu xun, kuwaasoo saameyn xooggan u geystay dadkii ku noolaa deegaannadaas oo u badan xoolo dhaqato.
Ugu dambeyn, Ganacsatada Waa-weyn ee Somaliland ayaa maalin ka hor waxay ururiyeen lacag malaayiin Doollar ah, kuwaasoo ay ugu talo-galeen in gurmad loo fidiyo shacabka ay abaaruhu ku saameeyeen qaybo ka mid ah dalka.
RW SHAMA’ARKE: Haddii Federaaliisimka uu dagaal iyo dhibaato keenayo waa inaan dib u fiirino
Ra’iisul Wasaare, Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa maanta ka sheegay magaalada Gaalkacyo, haddii habka Federaaliisim-ka ee Somalia ay qaadatay uu sababayo colaado, inay tahay inay dib u eegaan.
Sharma’a’rke oo ka hadlayay shir jaraa’id oo ay wadajir u qabteen madaxda Maamullada Galmudug iyo Puntland, kaddib Wadahadal Gaalkacyo ku dhex-maray maanta Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo C/kariin Xuseen Guuleed, ayaa ku boorriyay labada Hoggaamiye inay u hoggaansamaan xabbad-joojintii ay horay ugu heshiiyaan, ayna xushmeeyaan heshiiska ay kala saxiixden.
“Runtii waxaa yaab ah in Federaaliisimka oo aan is-lahayn Dalka wuu ku dagayaa, Balse haddii uu Federaalku xabbad iyo dhib keenayo inaynu dib u fiirino weeye,” ayuu yiri RW Soomaaliya, inkastoo uusan faahfaahin dheeri ah ka bixin sida laga yeelayo Federaalka.
Sidoo kale, RW Somalia ayaa Madaxweynayasha Galmudug iyo Puntland ku adkeeyay inaysan xabbad ka dhicin Gaalkacyo inta laga gaarayo shirka ay labada hoggaamiye ku yeelanayaan 20-ka bishan Kismaayo oo ah xarunta maamulka Jubbaland.
“Waxaa halis ah in innagoo mas’uuliyad u hayn dalkan iyo dadkan ay maalin walba hoos-teenna ku dhintaan Dad, runtiina waa arrin khatar ah oo Adduun iyo Aakhiraba nala-gula xisaabtamayo,” ayuu yiri RW Sharma’arke.
Ra'iisul Wasaarha Somalia oo sii hadlayay, ayaa intaas ku daray in laba arrin looga baahan yahay, Hoggaamiyeyaasha Galmudug iyo Puntland, kuwaas oo ah; In aysan Xabbadi ka dhicin Gaalkacyo inta laga gaarayo shirka 20-ka bishan ka dhici doona Kismaayo iyo in la fuliyo heshiiskii xabad-joojinta ahaa ee bilowgii bishan lagu gaaray magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta.
Dhanka kale, C/weli Gaas iyo C/kariin Guuleed, ayaa waxay Shirka jaraa’id ka sheegeen inay diyaar u yihiin inay qaataan nabad, isla markaana Gaalkacyo lagu wada deggenaado nabad iyo dagaal la’aan.
Ugu dambeyn, Heshiiska Magaalada Gaalkacyo lagu kala saxiixday Maanta ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo Magaaladaas ay Toddobaadyo dhawr ahi ka socdeen Dagaallo geystay khasaare isugu jirta naf iyo maal, sidoo kalena ay ku barakaceen 90,000 qof oo ku noolaa Gaalkacyo.